Dhagayso:- Culimadda Soomaaliyeed oo ka Digtay Gaalaysiin Bulshada qaybo ka mid ah gobolka Mudug. | Puntland Vision
Dhagayso:- Culimadda Soomaaliyeed oo ka Digtay Gaalaysiin Bulshada qaybo ka mid ah gobolka Mudug.
Iyadoo Koonfurta magaalada Gaalkacyo dhawaan looga dhawaaqay in lagu hayo Sawir uu leeyahay Nabi Muxamed NNKH ayaa arintaasi waxay sababtay in culimo badan ay ka xumaato dhacdadaasi oo siyaabo kaladuwan uga hadlaan.
Hay,ada Culimadda Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayey ka hortagida Gaalaysiinta iyo Munkarka la barayo Caruurta iyo haweenka ayaa culimadu ay sheegeen inay ka digtoonaadaan.
Madaxda Maamulka Galmudug uu ugu horeeyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayey ka codsadeen in arintan ay si deg deg ah wax uga qabtaan.
Bayaan ay kasoo saareen magaalada Muqdisho oo uga digayaan Bulshada Koonfurta Magaalada Galkacyo uu kusuganyahay oo uu xarun wayn ku leeyahay C/wali Cali Cilmi Afyare ayey ka Digeen Dhacdadaasi.
Hoos ka dhagayso Codka Culimadda